eSancharpati | माओवादी महाधिवेशन, समूहगत निष्कर्ष सुनाउने कार्यक्रम सकियो-यस्तो भन्छन टोली नेता ? - eSancharpati माओवादी महाधिवेशन, समूहगत निष्कर्ष सुनाउने कार्यक्रम सकियो-यस्तो भन्छन टोली नेता ? - eSancharpati
माओवादी महाधिवेशन, समूहगत निष्कर्ष सुनाउने कार्यक्रम सकियो-यस्तो भन्छन टोली नेता ?
१५ पुष २०७८, बिहीबार २०:११
काठमाडौँ- नेकपा (माओवादी केन्द्र) को राजधानीमा जारी आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्रमा टोली नेताले आफ्नो धारणा राख्ने क्रम सकिएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को राजनीतिक प्रतिवेदन र नेता देवप्रसाद गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको विधान मस्यौदामाथि छलफलका लागि २५ समूह बनाइएको थियो । बुधबार विभिन्न ११ समूहले आफ्नो धारणा राखेका थिए भने आज बाँकी रहेका १४ समूहले आफ्नो समूहको विचार प्रस्तुत गरेका थिए ।
## prachanda ## puspa kamal dahal #नेकपा माओवादी केन्द्र #माओवादी महाधिवेशन